Shirka Addis Ababa oo Birri lasoo gabagabeenayo+Khudbad xamaasad leh uu ka jeediyay R.W Cabdiwali. | Shirka Addis Ababa oo Birri lasoo gabagabeenayo+Khudbad xamaasad leh uu ka jeediyay R.W Cabdiwali. – Latest News
« Wafdi kasocda Imaaraadka Carabta oo maanta gaaray Kismaayo.
AMISOM and the Federal Government of Somalia conclude a Conference on the Role… »
Shirka Addis Ababa oo Birri lasoo gabagabeenayo+Khudbad xamaasad leh uu ka jeediyay R.W Cabdiwali.
Addis Ababa(GT)-Ra’iisul Wasaare Cabdiwali oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey shirkii looga hadlayey arrimaha qaxootiga Soomaaliya
Addis,Ababa, 20, August, 2014….Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiwali Sheikh Axmed iyo waftigii uu hogaaminayey ayaa saaka ka qayb galay shir ka furmay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, oo looga hadlayo xal u helidda qaxootiga Soomeeliyeed ee ku nool daafaha caalamka gaar ahaan wadamada dariska.
2. Iyo Warmurtiyeed ay soo wada saareen dhamaan madaxdii ka qayb galay shirka iyo Hay’ada UNCHCR. Kaas oo qeexaya in wadan kasta uu sii wado qaybta uu ka qaadan karo sii haynta qaxootiga iyo in dhinaca Soomaaliya loo diyaariyo jawi ay dadku dalkooda ugu soo noqon lahaayeen iyo Hay’ada Qaxootiga Aduunka sidii ay kaalin muuqata uga gaysan lahayd haynta iyo soo ceelinta qaxootiga Soomaaliya.